जापानमा प्रेगनेन्सी र शिशु जन्मको ३ रोचक तथ्य | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानमा प्रेगनेन्सी र शिशु जन्मको ३ रोचक तथ्य
पहिलो चोटी आमा बन्नलागेकाहरुको लागि प्रेगनेन्सी निकै रोचक र अप्रत्याशित स्थिति बन्न सक्छ। यस्तो बेलामा के गर्ने , कस्तो व्यवहार गर्ने, कसको सल्लाह सुन्ने भन्ने कुरा मनमा खेलीनै रहनछ। त्यस माथि आफ्नो समाज र देश भन्दा बाहिर बच्चा जन्माउने र हुर्काउनेहरुको लागि अनेक बाधक खुड्किलाहरु आइपर्छन।
जापानमा मातृ र शिशु मृत्यु दर विश्व न्युन भएकोले शिशु जन्माउन निकै सुरक्षित देश मानिन्छ। तर पनि यहाँ प्रेगनेन्सी केहि यस्ता सोचाई छन् जुन हजुर हाम्रो देश संग बेमेल हुनाले हामीलाई अचम्ममा पार्दछ। यस्तै रोचक र बेमेल ३ तथ्य हेरुम है त।
१. तौल बढ्नु
प्रेगनेन्सीमा महिलाहरुले दुइ जनाको लागि खाने भएकोले मन लागेको खानु पर्ने हाम्रो सोच हुन्छ। जापानमा भने यो कुरालाई गलत मानिन्छ।
बाहिरी देशमा प्रेगनेन्सीको बेला महिलाको १०-१४ किलो तौल बढ्नुलाई सामान्य मानिन्छ। त्यो हिसाबको बडी मास इन्डेक्सलाई पश्चीमी मुलुकमा बच्चा र आमाको लागि स्वस्थकर मानिन्छ। जापानीहरुमा भने तौललाई लिएर बेग्लै धारणा पाइन सकिन्छ। उनीहरु गर्भवती महिलाको ७- १२ किलोसम्म मात्र तौल बढ्नुपर्ने सुझाब दिइन्छ। जापानमा रहेका बिदेशी गर्भवती महिला माझ गरिएको सर्भेमा १७% महिलाहरुलाई ६ केजी मात्र तौल बढ्नु पर्ने बताइएको पाइयो।
यो पछाडीको कारण चाही कम तौल थपिदा डेलिभरी निकै सहज र कम जोखिम पूर्ण हुने जापानि डाक्टरहरु बताउछन। त्यति मात्र नभएर कम तौल हुदा महिलालाई प्रेगनेन्सी पछि तौल सन्तुलन गर्न सहज हुने हुदा स्ट्रेस कम हुने बताइन्छ।
२. एपीडुरल पेन रिलिफ
पश्चीमी मुलुकमा एपिडुरललाई डेलिभरीको बेला निकै सामान्य मानिन्छ। यसमा महिलालाई स्पाइनल नर्भको भाग तिर लोकल अनेस्थेसिया दिइन्छ। यसले महिलालाई लेबर पेनको बेला “बेबी पुस” गर्न मदत मिल्छ। जापानमा भने लेबर पेनको बेला एपिडूरल दिइदैन।
The Birth Deckさん(@thebirthdeck)がシェアした投稿 – 2019年 2月月17日午後1時45分PST
अमेरिकामा लगभग ५०% महिलाहरु एपिडूरल लिने गर्छन। जापानीहरु यो बिधिलाई अप्राकृतिक मानिन्छ। प्रकृतिक तरिकाले डेलिभरी गर्दा बच्चा र आमा बिचको आत्मियता बढ्ने जापानीहरु सोच्दछन। यदि हजुर आफ्नो डेलिभरीमा एपिडूरल चाहनु हुन्छ भने हस्पिटललाई पूर्व जानकारी दिएर त्यो बिधि छ कि छैन भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ।
३. भिटामिन, सुशी र टि
अरु देशमा गर्भवती महिलाहरुलाई डाक्टरले भिटामिनको सप्लिमेन्ट लिनु पर्ने सल्लाह दिन्छन। गर्भवती महिलालाई दीने केहि सप्लिमेंत्मा फोलिक एसिड, क्याल्सियम, भिटामिन सी र जिंक पर्छन। यी सप्लिमेण्ट दिनुको उदेस्य बच्चाहरुले सबै पोषक तत्व पाउन भनेर हो। जापानमा भने यी सप्लिमेन्ट ड्रग स्टोरमा सजिलै पाइएपनि खाने सुझाब दिईदैन। त्यो भन्दा पोषक आहार अपनाउनु पर्ने बताउछन।
अरु देशमा प्रेगनेन्सीको बेला काचो माछा मासु खानु नहुने धारणा छ। जापानमा भने यो बेला सुशी बच्चाको लागि सबै पोषक तत्व भएको आहार भएकोले गर्भवती महिलाले सुशी खानु राम्रो मानिन्छ। अरु किसिमको काचो मासु खान नहुने सुझाब चाहि जापानी डाक्टरहरु पनि दिन्छन। त्यसै गरि गर्भवती महिलाहरुले क्याफिन धेरै लिन नहुने धारणा अरु देशमा हुन्छ भने जापानमा गर्भवती अवस्थामा ग्रिन टि लिनुलाई नराम्रो मानिदैन।
देश नै पिछे यस्ता सोचाई र चलनमा भिन्नता देखिन्छ। आफ्नो दम्पतिले प्रेगनेन्सी र शिशु जन्मको ’boutमा सकेसम्म जानकारी लिईराख्नु सबै भन्दा राम्रो हुन्छ। यस्तो बेला सबैले सल्लाह सुझाब दिने हुनाले सबैलाई मान्न त सकिदैन तर पनि धन्यवाद भन्दै आफु जस्तो सुकै परिस्थितिको लागि तयार रहनु पर्दछ।